Lenovo QE03 Neckband Bluetooth Earphone (Red)K20,000
Lenovo QE03 Neckband Bluetooth Earphone (Black)K20,000
Lenovo HE08 Neckband Bluetooth Earphone (Black)K27,000
Lenovo HE08 Neckband Bluetooth Earphone (Red)K27,000
Lenovo HE06 Neckband Bluetooth Earphone (Red)K24,000
Wesdar R81 Lightning Earphone (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: R81 Type: Earphones Color: White Impedance:16Ω Horn: Copper ring horn Sensitivity: 96.7dB Frequency respond: 20Hz~20KHz Plug: Lightning Cable Length: 120cm
Wesdar R80 USB Type-C Earphone (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: R80 Type: Earphones Connectors: USB Type-C Cable length: 1.2 meters Color: White
Wesdar R55 Bluetooth Wireless Neckband Earphone (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number:R55 IC: JL Battery: 110mAh Charging: Micro USB Music time: 4-5 hours(80% volum) Talking: 8 hours(80% volum
Wesdar R6 Stereo In-Ear Earphone (Gold)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Driver Diameter: Φ10MM Impedance: 32Ω±15％ Sensitivity: 105±6dB at 1KHz,6mW Frequency respond: 20Hz~20KHz Cable Length: 1.2M Adaptor plug: Gold-plated φ3.5mm stereo plug
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Bluetooth V5.0 technology, the transmission speed is twice higher. The enhanced anti-interference enablesamore stable connection, 65ms game delay, no need to wait Designed for the...
Sony MDR-XB55AP EXTRA BASS In-ear Headphones (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Small Pouch Headphone Type: Closed, Dynamic Driver Unit: 12 mm, dome type (CCAW Voice Coil ) Magnet: Neodymium Impedance (Ohm): 16 ohm (1kHz) Frequency Response:...
FOOMEE QA41 Wired Earphone (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wired Headset Economic Design Comfortable Silicone Button Control HD Video Call Compatible with all 3.5mm Port enable Devices 1.2m . Cable Length Color : Black & White...
FOOMEE QA41 Wired Earphone (Black)